တိုးပွားလာသောစားသုံးမှုနှင့်အဆင်ပြေသောထုတ်ကုန်များ၏လိုက်စားမှုကြောင့်, ရေခဲမုန့်သည်စျေးကွက်တွင်သြဇာကြီးထွားလာသည်. ဘီစကွတ်များသည်ရေခဲမုန့်များ၏လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. မကြာသေးမီကစျေးကွက်၌တည်၏, ငါတို့ ...
October 18, 2020 is the 20th Anniversary of Dingson Food Machinery Ltd.. In the past 20 နှစ်ပေါင်း, Dingson had been through featured development and had successfully becomeamature food machinery corporation. 20 years isamilestone for the company’s development and it forebodes the company’s continuous reproduction breed in…
နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်း၌ 2016, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိမ်းလန်းသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်သည်, ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးကိုလိုက်ရှာ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အာလူးချစ်ပ်များနှင့်ရေစာလုပ်ငန်းများ၏ကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုမြန်ဆန်ဖို့ဘယ်လိုအပြန်အလှန်သုတေသန, စားသုံးသူများမှအမြတ်အစွန်းယူဆောင်, နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန်, တရုတ်စားနပ်ရိက္ခာစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းအာလူးချောင်းစားနပ်ရိက္ခာကော်မတီ“ ၁၁ ယောက်မြောက်အမျိုးသား ...
Dingson Food Machinery Ltd ၏ ၁၉ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်
အောက်တိုဘာလတွင် 18, 2019, Dingson Machinery သည်တန်ဇိုးတွင်ကျင်းပသောပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့သည်, Zhongshan သည် ၁၉ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်သည်. ကုမ္ပဏီစီစဉ်သူ, အားလုံး Dingson န်ထမ်း, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများနှင့်အထူး guests ည့်သည်များသည်ယနေ့ညနေတွင်စုရုံးကြသည်, မျက်မှန်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့် Dingson ၏တည်ထောင်ခြင်းအတွက်ရွှင်လန်း 19 နှစ်ပေါင်း. အစမှာ…
ပြပွဲတဲ: W3A18 ပြပွဲတည်နေရာ: ရှန်ဟိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲစင်တာ (SNIEC), တရုတ် 2019 ရှန်ဟိုင်းရှိ Bakery China Exhibition Show သည်အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့သည်. ဒီမှာ, Zhongshan Dingson Food Machinery Ltd. ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာစုံမှကျွန်ုပ်တို့၏တဲသို့လာရောက်လည်ပတ်သောဖောက်သည်များအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါသည်။